Basa Redu - UP Boka
Isu tinopa ruzivo rwese uye zvishandiso zvezvigadzirwa zvedu kune akakosha vatengi uye vatinoshanda navo kuti titsigire bhizinesi ravo uye kusimudzira. Isu zvakare tichapa mutengo wakasarudzika wemakina ekutanga mashoma, iwo masampuli ekudhinda, kurongedza uye zvekushandisa zviripo, asi kutakura kunofanira kutakurwa nevatengi nevatinoshanda navo.
Nguva yekuendesa yeyakajairwa michina inowanzo kuve mazuva 30-45 mushure mekugamuchira dhipoziti. Nguva yekuendesa yeiyo yakakosha kana hombe michina yemidziyo inowanzo kuve mazuva 60-90 mushure mekugamuchira mubhadharo.
Iyo yemhando yekuvimbisa nguva yechigadzirwa ndeye gumi nematanhatu mwedzi kubva paChina chiteshi. Tinogona kupa vatengi kuisirwa mahara uye kurovedzwa, asi mutengi anoona nezve kutenderera-kutenderera matikiti, zvekudya zvemuno, pekugara uye mainjiniya mvumo.
Kana icho chigadzirwa chakakuvadzwa nekuda kwekutendeka kwevatengi zvisiri izvo, mutengi anofanirwa kutakura zvese zvinodhura zvinosanganisira mitengo yezvipenga uye zvifambiso zvemitero nezvimwewo. kutsiva mahara.
Tinogona kugadzira zvigadzirwa zvakasarudzika zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi pazvinhu zvakasiyana siyana, zvinosanganisira maitiro, chimiro, mashandiro, ruvara nezvimwe.Uyezve, kudyidzana kweOEM kunogamuchirwa.